प्रिस्क्रिप्शन बिना एन्टी डिप्रेसन्टहरू खरीद गर्नुहोस्! राम्रो महसुस गर्नुहोस्, पूर्णको लागि बाँच्नुहोस्!
हामीले भेट्यौं6उत्पादनहरू तपाईका लागि उपलब्ध छन्
अवसाद एक साधारण स्वास्थ्य अवस्था हो जुन व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलापहरूमा असर गर्दछ। डिप्रेसनबाट प्रभावित बिरामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्न ऊसँग शक्ति नभएको भावना हुन सक्छ। अरू कसैलाई कुनै स्पष्ट कारण बिना चिढचिलो महसुस हुन सक्छ। डिप्रेसनका लक्षणहरू फरक फरक हुन्छन्। दुई हप्ता भन्दा बढीको लागि सुस्त र तल महसुस गरेको व्यक्तिलाई विशेष ध्यान चाहिन्छ किनभने यो डिप्रेसनको लक्षण हुन सक्छ।
अवस्था सामान्य छ। तपाईले कहिल्यै पनि गम्भीर उदासीनता पाउनुहुनेछ भन्ने सम्भावना २० मा १ पनि हो र सामान्य महिलाहरूमा पुरुषहरू भन्दा यसबाट पीडित हुने बढी सम्भावना हुन्छ। बच्चाहरू र बुढेसकाल पनि यसबाट पीडित हुन सक्छन्। डिप्रेसन छोटो हुन सक्छ, तर यो महीना वा वर्ष सम्म पनि रहन सक्छ। यदि तपाईं कम्तिमा दुई बर्ष देखि निराश हुनुहुन्छ भने, यो जीर्ण उदासीनता भनिन्छ।
अवस्थालाई बुझ्नका लागि तपाईंले डिप्रेसनको कारण के हुन जान्नु आवश्यक छ। एक निराशा को कारणहरु को एक ठोस पकड को माध्यम बाट एक एक उपचार पाउन को लागी अधिक प्रभावी ढंगले काम गर्न सक्छन्। निस्सन्देह, डिप्रेसनको उपचार गर्न सजिलो कुरा छैन तर डिप्रेसनको कारणहरूलाई हेर्दा यो किन हो भन्ने कुराको तपाईंलाई अझ ठूलो समझ हुनेछ।
डिप्रेसन कारण: के कारण डिप्रेसन?
त्यसोभए डिप्रेसनको कारण के हुन सक्छ? के डिप्रेसन दिमागमा न्यूरोट्रान्समिटरहरू जस्ता शारीरिक कारकका कारणले हुन्छ वा मानसिक नकारात्मक सोच विचारहरू जस्तो मानसिक कारकहरूले गर्दा हुन्छ? असन्तुष्ट उत्तर यो छ कि यो व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ।
केही व्यक्तिहरूको लागि यो अवस्था मुख्यतया दिमागमा रासायनिक असंतुलनबाट उत्पन्न हुन्छ र अरूहरूको लागि मुख्य कारण नकारात्मक सोच हो। भिटामिनको कमी वा अत्यधिक व्यायाम जस्ता अन्य कारकहरू पनि अपराधी हुन सक्छन्। संक्षिप्तमा, डिप्रेसनका कारणहरू एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन्छन्।
केहि व्यक्तिगत सुविधाहरूले कसैलाई यो अवस्थाको लागि अतिरिक्त जोखिमपूर्ण बनाउन सक्छ। केही व्यक्ति समस्याहरू समाधान गर्न वा अप्रिय घटनाहरूको सामना गर्न सफल हुँदैनन्। वा तिनीहरू कसैलाई सहयोगको लागि सोध्ने हिम्मत गर्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो समस्याको साथ एक्लै रहन्छन्। कमजोर बनाउन सक्ने अन्य व्यक्तिगत सुविधाहरू:
आफैलाई धेरै माग
पर्याप्त योग्य छैन महसुस
एउटा महत्त्वपूर्ण शारीरिक कारण वंशानुगतता हो। के तपाईंको परिवारमा डिप्रेसनहरू आउँछन्? त्यसोभए तपाई निराश हुन सक्नुहुन्छ।
साथै, तपाईंको शरीरमा केहि पदार्थहरूले कहिलेकाँही उदासिन भावनाहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यो हार्मोन, औषधि, रक्सी र लागूपदार्थको लागि जान्छ।
यसबाहेक, केहि शारीरिक रोगहरू अक्सर उदासिन भावनाहरूको साथ हुन्छन्। उदाहरणहरूमा थाइरोइड र एड्रेनल कोर्टेक्स, मधुमेह र हृदय रोगहरूको विकारहरू समावेश छन्।
तपाईको जीवनमा के हुँदैछ
राम्रो वा नराम्रो अनुभव वा घटनाहरू जसले अचानक तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्दछ तपाईंलाई निराश बनाउन सक्छ। उदाहरणहरू तपाईंको पार्टनरको घाटा, तपाईंको जागिर हराउने वा अर्को शहरमा सर्नुको उदाहरणहरू हुन्। साथै, अत्यन्त चौंकाउने घटनाहरू जस्तै डकैती वा दुर्घटनाले तपाईंलाई निराश तुल्याउन सक्छ।
तपाईं घटनाहरू द्वारा लामो अवधिको पछि निराश हुन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक बच्चा को रूप मा दुर्व्यवहार वा यौन शोषण थिए। वा यदि तपाईंको कुनै आमा वा बुबा चाँडै मरे।
यो महसुस गर्न आवश्यक छ कि समस्या जहाँ भए पनि दुबै क्षेत्रलाई असर गर्दछ ताकि डिप्रेसनलाई निको पार्न तपाईंले दुवै क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने चिकित्सीय दृष्टिकोणहरूमाथि विचार गर्न आवश्यक छ।
यो अवस्था कसरी विकसित हुन्छ भनेर अहिलेसम्म थाहा छैन। यो मानिन्छ कि जैविक प्रक्रियाहरू, मनोवैज्ञानिक कारकहरू, व्यक्तिगत स्थिति र जीवनमा विशेष घटनाहरूको प्रक्रियाको विकासमा उनीहरूको भूमिका छ। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जुन के कारण डिप्रेशन र यसको मार्गलाई प्रभाव पार्न सक्छ:
वंशानुगत बढेको जोखिम: यो तथ्य यो देखाइन्छ कि परिवारका सदस्यहरूमा यो रोग पहिले नै धेरै पटक भएको छ।
तनावपूर्ण अनुभवहरू: उदाहरणका लागि दुरुपयोग वा उपेक्षा, तर यो एक बिछोड वा प्रियजनको मृत्यु
बचपन र किशोरावस्थामा दीर्घकालीन चिन्ताका विकारहरू, आत्म-विश्वास र असुरक्षाको कमीको साथ
बायोकेमिकल परिवर्तनहरू: यो पत्ता लागेको छ कि डिप्रेसनमा दिमागमा मेटाबोलिजम परिवर्तन हुन्छ र स्नायु उत्तेजनाहरू बिस्तारै प्रसारित हुन्छन्। केहि मेसेन्जर पदार्थ र हार्मोनल परिवर्तनले पनि भूमिका खेल्न सक्छ।
स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, क्यान्सर वा हाइपोथायरायडिज्म जस्ता शारीरिक रोगहरू
बोझिला जीवन स्थिति: उदाहरणका लागि, लगातार तनाव र अत्यधिक मागहरू वा एकाकीपन।
प्रकाशको अभाव: केही व्यक्तिहरू अन्धकारको शरद andतु र जाडो महिनामा डिप्रेसनको साथ प्रकाशको अभावमा प्रतिक्रिया दिन्छन्।
डिप्रेसनको प्रकार: तिनीहरू के हुन्?
सबै उदासीनता एकै हुँदैनन्। तिनीहरू हल्का देखि गम्भीर फरक हुन सक्छ। एक डिप्रेसनबाट एक व्यक्तिले कति पीडित गर्दछ कसरी लक्षणहरूले उसको वा उनको दैनिक कार्यकलापमा बाधा पुर्‍याउँछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ डिप्रेसन को धेरै प्रकारहरु छन्:
हल्का उदासीनताका साथ प्राय: दैनिक गतिविधिहरू जारी राख्न अझै सम्भव हुन्छ। तर पनि, गुनासोहरू गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ। अझ धेरै गम्भीर गुनासोहरू रोक्न रोकथामको क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न सकिन्छ।
तपाईं एक गम्भीर उदासीन पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ किनकि धेरै लक्षणहरू देखा पर्दछन् वा किनभने लक्षणहरू चाँडै नराम्रो हुन्छ। गम्भीर उदासीनताले दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ: लामो अवधिमा तपाई कतै जानु हुन्न, तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न, किनमेल गर्न सक्नुहुन्न, बच्चाहरूको हेरचाह गर्नुहोस् र दिन र रातको तालको अनुसरण गर्नुहोस्। भविष्य, विगत, यहाँ र अहिले: सबै कुरा ब्ल्याक होल जस्तो देखिन्छ। केहि मानिसहरु मृत्युको बारेमा सोच्दछन्: उदासिनता बाट बाँच्नु भन्दा मर्नु तिनीलाई कम नराम्रो लाग्छ।
यसलाई 'एक ध्रुवीय डिप्रेशन' वा 'साधारण' डिप्रेशन पनि भनिन्छ। डिप्रेसर डिसअर्डर तब हुन्छ जब कोही तल लामो समयसम्म अवशेश हुन्छ। एक अवधिको अवसादमा परेका लक्षणहरू देखा पर्न उदासिन एपिसोड भनिन्छ। के यो केवल एक भाग हो? त्यसो भए यो एकल एपिसोड डिसअर्डर हो। यदि एपिसोडहरू आफैंलाई दोहोर्याउँदछन्, डिप्रेसन डिसआर्डरलाई आवर्ती भनिन्छ।
डिस्टमिक डिसअर्डर डिप्रेसर डिसअर्डर भन्दा 'हल्का' हुन्छ। कम्तिमा दुई वर्षको लागि (हल्का) उदासिन मुड हुनुपर्दछ र साथै, दुई वा बढी औदासिनिक लक्षणहरू (साइकोमोटर चिन्ता वा अवरोधको अपवाद बाहेक) उपस्थित हुनुपर्दछ। लक्षणहरू डिप्रेसनको भन्दा सामान्यतया हल्का हुन्छन्, तर डिस्टाइमिक डिसअर्डर बढी गम्भीरको रूपमा अनुभव गरिन्छ। यो डिस्ट्यामिक डिसऑर्डरको लामो अवधिको कारण हो।
राम्रो manic डिप्रेशन को रूप मा परिचित छ। द्विध्रुवीय डिसअर्डरमा, खुसीको अवधि अति निराशाको अवधि संग वैकल्पिक। 'राम्रो' अवधिको अवधिमा कसैले अत्यन्त ऊर्जावान र हँसिलो महसुस गर्दछ। द्विध्रुवीय डिसआर्डरमा, टाइप I र टाइप II का बीच भिन्नता छुट्याइन्छ। एक प्रकारको द्विध्रुवी विकार पत्ता लगाईन्छ यदि एक व्यक्तिमा कम्तिमा एउटा manic भाग छ भने, एक वा बढी डिप्रेशनल एपिसोडको साथमा पत्ता लागेको छ। प्रकार २ ले कम्तिमा एउटा अवसादग्रस्त एपिसोड र कम्तिमा एउटा हल्का उन्मत्त घटना भोग्नु भएको जनाउँछ। हल्का उन्मत्त भागलाई हाइपो मनिआकल एपिसोड पनि भनिन्छ। एक हाइपोमानियाकल एपिसोडमा लक्षणहरू यति खराब हुँदैनन् कि सामान्य कार्यकलाप गडबडी हुन्छ। द्विध्रुवी विकारको एक (सम) हल्का रूप साइक्लोथीम डिसअर्डर हो।
यो त्यस्तो अवस्था हो जब डिप्रेसन भावनाहरु बाहेक, त्यहाँ भ्रम वा भ्रम पनि हुन्छन्। भ्रम प्राय: सामग्रीको सर्तमा उदासीनताको अनुरूप छ।
यस किसिमको उदासीनता महिलामा हुन सक्दछ जसको भर्खर बच्चा भएको थियो। प्रसव-प्रसव उदासीनता 'सामान्य' डिप्रेसनको लक्षणहरूमा समान छ, तर बच्चा जन्म पछि चार महिना भित्रमा देखा पर्दछ। सबै भन्दा सामान्य लक्षणहरू डिप्रेसन भावनाहरू हुन् र बच्चाको आनन्द लिन सक्षम नहुनु हो।
मानिसहरू जो शरद ,तु, जाडो र / वा वसन्तको शुरुमा डिप्रेशनबाट ग्रस्त हुन्छन् प्रायः मौसमी डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुन्छन्। धेरै जसो चिनिएको जाडो मौसम हो। जाडो डिप्रेसनका लक्षणहरू: तल र निराश महसुस, धेरै सुत्न, थकान, चिड़चिड़ाहट, खाने धेरै वजन। एक जाडो डिप्रेसन तब देखा पर्दछ जब लक्षणहरू लगातार कम्तिमा दुई वर्षमा लगातार हुन्छ। एक जाडो डिप्रेसन प्राय: महिलामा पुरुषमा भन्दा धेरै हुन्छ। दिनको उज्यालोमा हुने परिवर्तनले जैविक घडीलाई विचलित पार्छ, जुन धेरै जसो हिउँदमा डिप्रेसन निम्त्याउँछ। हर्मोन melatonin शायद एक भूमिका खेल्छ। जाडो ब्लुज जाडो डिप्रेशन को एक हल्का रूप हो। त्यहाँ उजुरीहरू छन्, तर जो मानिस जाडो ब्लुजबाट ग्रस्त छन् बिरामी छैनन्। लक्षणहरू जाडोको उदासी जस्ता हुन्, तर कम गम्भीर छन्।
डिप्रेसन आनुवंशिक छ?
जेनेटिक्सले एक व्यक्तिलाई थोरै डिप्रेसनको रूपमा लिन सक्छ तर यो निर्णायक कारक मात्र हो। धेरै जसो केसहरूमा परिवारमा अवस्था र चालचलन देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ किनकि व्यवहार र चिन्ताको ढाँचा जसलाई पार गर्यो भन्दा यो पार गर्यो कि आनुवंशिकीले ठूलो भूमिका खेल्दै छ। तर जेनेटिक्स एक कारक छन् भने पनि, यसले डिप्रेसन उपचार दृष्टिकोणलाई असर गर्न धेरै गर्दैन। डिप्रेसनको सफल उपचार अझै सम्भव छ।
सर्त सिक्न सकिन्छ। नकारात्मक सोच र नकारात्मक व्यवहार परिवारहरू मार्फत पार गर्न सकिन्छ, माथि उल्लेख गरे जस्तै, वा एक व्यक्ति नकारात्मक सोच र अन्य व्यक्ति वा अनुभवबाट व्यवहार सिक्न सक्दछ।
जहाँसम्म नकारात्मक सोचाइ जान्छ, यो होइन कि यी परिस्थितिले व्यक्तिलाई नैराश्य बनायो तर व्यक्तिले यी घटनाहरूको व्याख्या यसरी गर्‍यो कि नकारात्मक विश्वासहरू बने र यी विश्वासहरू स्थिर रह्यो।
यहाँ जानकारीको महत्त्वपूर्ण टुक्रिमा केहि पनि छ कि केहि पनि अनलर्न हुन सक्छ।
नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यस्तो देखिन्छ कि साधारण कार्यले अचम्मका काम गर्न सक्छ डिप्रेसन कम गर्न र निको पार्ने पनि।
डिप्रेसनका गीतहरू: डिप्रेसनका लक्षणहरू के-के हुन्?
प्रत्येक व्यक्तिले बिभिन्न डिग्री र विभिन्न प्रकारको डिप्रेशन अनुभव गर्दछ, मतलब विभिन्न संकेत र लक्षणहरूको बिभिन्नता। तर त्यहाँ केही सामान्य लक्षणहरू र डिप्रेशनका लक्षणहरू छन् जुन व्यक्तिको क्लिनिकल डिप्रेसन डिसअर्डर हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि संकेत र लक्षणहरूको सूचीको समीक्षा गर्दा कुनै चिकित्सक वा मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिने ठाउँ लिनुहुँदैन जसले पर्याप्त मात्रामा डिसआर्डरको निदान गर्न र एक उचित उपचार सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ।
धेरै जसो डाक्टरहरूले उदासिनता वा "ब्लूज" र क्लिनिकल डिप्रेसनको बिचमा अन्तर स्थापित गर्न कोशिस गर्छन्। यो सुझाव दिइन्छ कि यदि तपाइँ दुई हप्ता वा सोभन्दा बढी दिनको लागि डिप्रेशनको नियमित लक्षणहरू देख्नुहुन्छ र तपाइँको दैनिक तालिकामा हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्नु भएको छ भने तपाइँ एक डाक्टरसँग जानुहोस्।
केही धेरै सामान्य लक्षणहरू समावेश:
निराशा / असहायताको भावना: एक समग्र भावना कि चीजहरू जीवनमा राम्रो छैनन् र भविष्यमा राम्रो पनि लाग्दैन। साथै, जीवन को दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न केहि गर्न सकिदैन भन्ने भावना।
चासो को कमी: गतिविधिहरू जुन एक पटक जीवनको दैनिक हिस्साहरू थिए वा चीजहरू जुन व्यक्तिले प्राय: सबैभन्दा चासो राख्थ्यो, अचानक बिरोधमा पुगेको छ, वा व्यक्ति लामो समयसम्म भाग लिनको लागि हेरचाह गर्दैन।
निद्रा बानीमा अवरोध: यो अत्यधिक निद्रादेखि अनिद्राको बान्कीसम्म र मध्य रातमा उठ्न सक्दछ। यसमा सबै समय थकित हुनु र दिनको समयमा झपकी चाहिएको पनि समावेश हुन सक्छ।
अप्ठेरो परिवर्तनहरू: डिप्रेसन अक्सर वजनको तौल वा वजन को एक धेरै सम्झौता संग एक व्यक्ति या त खाने मा चासो हराउन वा आफ्नो भावनाहरु को पीडा कम गर्न को एक तरिका को रूप मा खाने को उपयोग गर्दछ वा उदासीनता संग।
कठिनाइ नियन्त्रण नियन्त्रणहरु: यो जलन / निराशा, अत्यधिक रोई, वा साधारण समस्या वा परिस्थितिमा रिसाउन सजिलो देखि हुन सक्छ।
ऊर्जाको कमी: डिप्रेसनले थकानको भावनालाई निम्त्याउँदछ जसले कसैलाई साना कामहरू गर्न पनि गाह्रो बनाउँदछ। केवल प्रायः वरिपरि बस्न चाहने बान्की अधिक ध्यान दिन सकिन्छ।
ध्यान केंद्रित गर्न: जो कोही उदासिनताको अनुभव गर्दै दैनिक काममा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या हुन सक्छ जुन पूरा भएको थियो। तिनीहरूलाई पनि हातमा कुराकानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या हुन सक्छ वा दिशाहरूको व्याख्या गर्न वा प्रश्नहरूको उत्तर दिनमा समस्या हुन सक्छ।
शारीरिक पीडा: पछिल्लो टाउको दुखाइ, पछाडि दुखाइ, मांसपेशी वा जोर्नीहरू, र पाचन समस्या सबै क्लिनिकल डिप्रेसनको साथ हुन सक्छ।
यदि तपाईं त्यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ जो उदासिनताका यी लक्षणहरू अनुभव गर्दैछन्, वा तपाईंले आफैंमा लक्षणहरू अनुभव गरिरहनुभएको छ भने, उत्तम सम्भावित डिप्रेसन उपचार पत्ता लगाउन चिकित्सक वा मनोचिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु उत्तम हुन्छ।
डिप्रेसन उपचार: डिप्रेसनको कसरी उपचार गर्ने?
राम्रो उपचार प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि डिप्रेसनको उपचार नगरिएमा, यो असीमित समय अवधिमा रहन्छ र अन्य रोगहरू बिगार्न सक्छ। गम्भीर लक्षण भएका व्यक्तिहरूले पनि डिप्रेसनको उपचार गर्न सक्छन्।
डिप्रेशनलाई हराउन धेरै तरिकाहरू छन्:
औषधि (डिप्रेसन ट्याब्लेट)
डिप्रेसनको उपचार गर्नका लागि औषधी: कुन एन्टिप्रेसन हुन्छ?
असंख्य फरक एन्टी डिप्रेसन ड्रग्स, एन्टीडिप्रेससन्टको रूपमा परिचित, डिप्रेसनको उपचार गर्न व्यापक रूपमा प्रयोगमा छ। एन्टीडिप्रेसन्ट्स औषधिहरू बिभिन्न समूहहरूको धेरै धेरै सम्बन्धित हुन्छन्। तिनीहरूले मस्तिष्कमा उपस्थित प्रमुख न्यूरोट्रान्समिटरको कार्यलाई प्रभाव पार्दछन्, यद्यपि कार्य संयन्त्रको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन।
डिप्रेसन ट्याब्लेटहरू डिप्रेसनका मानिसहरूमा उदासीनताका लक्षणहरू घटाउन सहयोगी हुन्, मुख्य रूपमा जब उनीहरूको डिप्रेसन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका एन्टिडप्रेससन्टहरू हुन्छन् जुन डिप्रेशन र अन्य प्रकारका अवस्थाहरू व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छ उदाहरणका लागि द्विध्रुवी विकार। एन्टीडिप्रेससन्टहरूले डिप्रेशनका लक्षणहरू सुधार गर्दछ महत्त्वपूर्ण न्यूरोट्रान्समिटरहरू, मस्तिष्क रसायनहरूको उपलब्धतालाई बढाउँदै। यो मानिन्छ कि यी मस्तिष्क रसायनहरूले भावनाहरू सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।
एन्टीडिप्रेससन्टको महत्त्वपूर्ण प्रकारहरू:
छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई): यी antidepressant को नयाँ वर्ग हो। यी औषधीहरूले दिमागमा सेरोटोनिन भनेर चिनिने न्यूरोट्रान्समिटरको स्तर परिवर्तन गरेर काम गर्दछ।
Tricyclic antidepressants (TCAs): यी एन्टीडिप्रेससन्ट्सको पहिलो वर्ग हुन् जुन बजारमा उदासीनताको लागि उपचार गर्न आएका छन्। तिनीहरू मुख्यतया मस्तिष्कमा दुई प्रमुख मस्तिष्क रासायनिक मेसेन्जर (अर्थात् न्यूरोट्रान्समिटर), सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिनको स्तरलाई असर गर्दछ। कुनै श doubt्का छैन, यी डिप्रेसन प्रबन्ध गर्न को लागी धेरै प्रभावी छ; तिनीहरूसँग धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। त्यस कारणको लागि, तिनीहरू अब डिप्रेसनको लागि पहिलो लाइन उपचार औषधिहरू रहिरहेनन्।
मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs): यो antidepressant को अर्को वर्ग हो। यी औषधीहरू डिप्रेसनमा भएका व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी सहयोगी हुन्छन् जसले अन्य चिकित्सा उपचारहरूमा प्रतिक्रिया दिन असफल हुन्छन्। तर हाम्रो खानाहरू मा धेरै पदार्थ जस्तै चीज वा वाइन, र केहि अन्य ड्रग्स उनीहरुसँग कुराकानी गर्न सक्छन्, त्यसैले MAOI लिने व्यक्तिले कडा आहार प्रतिबन्धमा अडिनु पर्छ।
सेरोटोनिन र नोरेपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (SNRIs): यी एन्टिडिप्रेसन्ट्सको नयाँ प्रजाति हुन्। तिनीहरूले सेरोटोनिन र नरेपाइनफ्रिन मस्तिष्क रसायनको उपलब्धता बढाउँदै डिप्रेशनका लक्षणहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
Bupropion र Mirtazapine डिप्रेशनको उपचार गर्न प्रयोग हुने बिरामीहरू तुलनात्मक हिसाबले नयाँ हुन्। यी औषधिहरूको सामान्य साइड इफेक्टमा चिन्ता, अनिद्रा, बेहोश, बेचैनी र वजन बढ्दछ।
एक ठूलो संख्या एन्टी डिप्रेसन ड्रग्स डिप्रेसनका बिरामीहरूको उपचार गर्नको लागि डाक्टरको लागि अब बजारमा उपलब्ध छन्। आधुनिक औषधीमा अहिले उपलब्ध अधिकांश औषधीहरू डिप्रेसनको उपचारमा प्रभावकारी पाइएको छ। समस्याको उपचार गर्न यी औषधीहरूको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा बिरामीको लागि सही औषधी छान्ने डाक्टरको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। बिरामीले वास्तवमै बिरामीको लागि काम गर्ने एक फेला पार्न मद्दतको लागि डाक्टरलाई आफूले भोगेका सबै लक्षणहरू प्रकट गर्नु पर्छ। सामान्यतया, एक बिरामी जो एक antidepressant औषधी दिइन्छ तीन देखि छ हप्ता भित्र सकारात्मक लक्षण को अनुभव गर्न शुरू हुनेछ। अधिकतम औषधि प्राप्त गर्नका लागि बिरामी डाक्टरले सल्लाह गरे अनुसार औषधी सेवन गरेर चिकित्सकसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्दछ।
यी औषधिहरूले डिप्रेसनको पनि उपचार गर्दछन् र 'नाबालिग' र 'प्रमुख' ट्रान्क्विलाइजरमा सामूहिक रूपमा राखिन्छन्।
माइनर ट्रान्क्विलाइजरहरू जस्तै बेंजोडाइजेपाइन डिप्रेसनको प्रबन्धनमा प्रयोग गरिदैन किनभने उनीहरूले लत बनाउन सक्छन्।
प्रमुख ट्रान्क्विलाइजरहरू मेलान्चोलिक वा साइकोटिक प्रकारको डिप्रेशनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसले मनोवैज्ञानिक लक्षणहरूको राम्रो लक्षणात्मक नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।
यी औषधीहरू द्विध्रुवीय विकारमा ठूलो महत्त्व राख्छन्। तिनीहरू उन्मादको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसले उनीहरूलाई 'एंटी-म्यानिक' बनाउँदछ, र उही समयमा, कठोरता र मुड बदल्ने घटना घटाउने तिनीहरूको क्षमताले उनीहरूलाई 'मुड स्टेबलाइजर्स' बनाउँदछ।
डिप्रेसनको लागि मनोवैज्ञानिक उपचारको एक विस्तृत विविधता छन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू निम्न अनुसार छन्:
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (CBT)
इन्टरपर्सनल थेरापी (आईपीटी)
धेरै मानिसहरू उदासिनता कसरी हटाउने भनेर बारेमा सोच्दछन्। चिन्ता नलिनुहोस् किनकी अवस्था उपचार योग्य छ। यो antidepressant औषधी र मनोचिकित्सा प्रयोग गरी प्रभावकारी उपचार गर्न सकिन्छ। डिप्रेसनबाट ग्रस्त बिरामीहरूमा पनि यी दुई विधिहरूको संयोजनको प्रयास गर्न सकिन्छ। हल्का देखि मध्यम डिप्रेशनमा पीडित बिरामीहरूमा मनोचिकित्सा बढी प्रभावकारी भएको पाइन्छ। डाक्टरहरूले अझै पनि गम्भीर प्रकारका पीडित बिरामीहरूको उपचार गर्न औषधि रुचाउँछन्। इलेक्ट्रोक्रोनभल्सिभ थेरापी मनोवैज्ञानिक लक्षणहरूको साथ डिप्रेसनको उपचारको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने उपचार मोड हो।
डिप्रेसनको साथ सहयोग: साथीहरू वा आफन्तहरूले के गर्न सक्छन्?
मानसिक समस्या वा रोग को मामला मा, धेरै व्यक्ति पहिले आफ्नो साथी, नातेदार वा साथीहरु को लागी। तिनीहरू प्राय: उदासिन लक्षण र परिवर्तन याद गर्न पहिलो हुन्। उनीहरूको सान्त्वना र समर्थन विशेष गरी उदासिन व्यक्तिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। गम्भीर उदासीनताको अवस्थामा, साझेदार र आफन्तहरूलाई पनि सहयोग आवश्यक पर्दछ।
तपाईंले प्रश्नको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ: “उदासिन कसैलाई कसरी सहयोग गर्ने? ”। आफन्तहरू र साथीहरूले आफैंलाई पहिले उदासीनताको क्लिनिकल तस्वीरको बारेमा सूचित गर्नु पर्छ। यस तरिकाले उनीहरूले उदास व्यक्तिको अवस्थालाई अझ राम्ररी चिन्न सक्छन् र उनको व्यवहारलाई बुझ्दछन्। चिकित्सा वा मनोवैज्ञानिक समर्थनको अतिरिक्त, स्वयं-सहायता समूहहरू पनि सम्भावना हुन सक्छ।
डिप्रेसनबाट पुन: प्राप्तिमा प्रेरणाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आफन्तहरूले व्यावसायिक सहायता लिन, उसको औषधी नियमित रूपमा लैजान र उपचार गर्ने डाक्टर वा थेरापिष्टसँग अपोइन्टमेन्ट राख्न प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्दछन्।
सक्रिय मद्दत र समर्थन विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ जब त्यहाँ संकेतहरू छन् कि कसैले आफ्नो जीवन लिन सक्छ। यस्ता संकेतहरूलाई गम्भीरतासाथ लिनु र उनीहरूको बारेमा अरूसँग कुरा गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो गम्भीर अवस्थामा सम्भव छैन भने, त्यहाँ सामाजिक मनोचिकित्सक सेवा, संकट केन्द्रहरू वा टेलिफोन परामर्श सेवा जस्ता सेवाहरू छन् जहाँ मद्दत पाउन सकिन्छ।